Su'aalaha La Isweydiiyo - Su'aalaha Badanaa La Is Weydiiyo ee Ilmo iska soo ridka ee Virginia
Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah su'aalaha ay bukaannadayadu si joogto ah u weydiiyaan.
Haddii aad qabtid su'aalo dheeri ah ama aad u baahan tahay caddeyn fadlan weydii mid ka mid ah Barayaasheena Bukaanka ama shaqaalaha caafimaadka markii aad u timaaddo ballan ama nala soo xiriir.
Macluumaadka halkan lagu soo bandhigay waxaa loogu talagalay ujeeddooyin waxbarasho oo keliya. Macluumaadkan in kastoo loo arko inuu sax yahay haddana lama hubo; waxaa laga yaabaa inay ku hoos jirto fasiraad, khaladaad ama wax laga tagay.
Ma hubo inta aad uurka leegtahay? Isticmaal annaga Xisaabinta Uurka
KU SAABSAN UURKA
Ilmo soo rididda ma nabad baa?
Ilmo iska soo rididdu waa mid aad u ammaan badan, gaar ahaan marka la sameeyo hore ee uurka. Daraasado badan ayaa la sameeyay oo muujinaya in ilmo iska soo rididda saddexda bilood ee ugu horraysa ay aad uga badbaado badan tahay dhalashada ilmaha. Xitaa ilmo soo ridista dambe way ka khatar yar tahay dhalashada ilmaha. https://rewirenewsgroup.com/article/2008/01/11/four-abortion-myths-dispelled/
Ilmo soo rididdu wax ma yeeli doontaa?
Dhammaanteen waxaan leenahay khibrado kala duwan oo leh dareen-celinta xanuunka. Dhakhaatiirta kaladuwan waxay adeegsadaan siyaabo kala duwan oo xanuunka loo xakameeyo. Habka loo yaqaan 'Aspiration D&C' ee loo adeegsado xarunteena, waxaa jiri kara oo kaliya daqiiqado yar oo xanuun ah. In kastoo ay caadi tahay in laga baqo xanuunka, cabsida xanuunka waa inaysan noqon qodobka ugu muhiimsan go'aankaaga. Waxaa lagu siin doonaa daawo kaa caawisa xanuunka waxaana lagu siin doonaa dhowr tallaabo oo daaweyn ah si kor loogu qaado raaxadaada. Barayaasheena caafimaadka ayaa kaa caawin doona inaad go'aansato ikhtiyaarka kuugu habboon: soo rididda nidaamka inta aad ku soo jeedo daawooyinka kaa caawinaya raaxadaada, inta aad huruddo, ama ilmo iska soo rididda caafimaadka iyadoo la isticmaalayo kiniinka ilmo soo rididda ee guriga ku jira.
Waa maxay Ilmo iska soo ridid ​​Caafimaad? Taasi ma kiniinka ilmo iska soo ridka?
Haa. Dhammaan ereyadan waxay tixraacayaan isla hab isku mid ah oo ilmo soo ridid ​​ah oo ammaan ah oo waxtar leh oo aan bixinno illaa da'da uurka ee toddobaadyada 9. Wixii macluumaad dheeraad ah, ka eeg Bogga Ilmo soo rididda.
Waa maxay Ilmo soo rididda Hab-raac ah?
Ilmo soo ridid ​​habsocod ah, oo sidoo kale loo yaqaan ilmo soo ridid ​​himilo ah, waxaa badanaa lagu maamulaa hab loo yaqaan hawo faaruq ah. Nidaamka laftiisa caadi ahaan wuxuu qaataa shan ilaa toban daqiiqo oo keliya, waana adeeg caadi ah oo ku dhaca xafiiska haweenka ee xafiiska caafimaadka dumarka. Waxaad ka heli kartaa intaas ka badan bartayada Bogga Nidaamka Ilmo soo rididda. Ilmo soo rididda nidaamka waxaa la siiyaa da'da uurka ee 15 toddobaad, 6 maalmood.
Uurkaygu intee le'eg yahay? Immisa toddobaad?
An qiyaastii cabirka usbuucyada uurka waxaa laga xisaabin karaa taariikhda caadadaadii ugu dambeysay. Waxaan bixinay a Xisaabiyaha Uurka kaas oo kuu ogolaanaya inaad gasho taariikhda mudadaada ugu dambeysa ay bixiso qiyaas.
Fadlan Xusuusnow: Kaliya baaritaanka, baaritaanka uurka, ama ultrasound-ka dhaqtar ayaa xaqiijin kara uurka iyo dhererka uurka ee qiyaasta. Caadada oo kaa baaqata macnaheedu maahan inaad uur leedahay, caadada oo la qabtaa macnaheedu maahan inaad uur leedahay ma uur leedahay
COVID-19, maxay kaga duwan tahay ballamaha?
Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Falls Church waxay si dhab ah u qaadataa caafimaadka iyo badbaadada qof walba, waxaanan dajinnay tallaabooyin lagu yareynayo soo-gaadhista COVID-19 ee bukaankeenna iyo shaqaalaheenna. Waxaad ka akhrisan kartaa war-saxaafadeedkeena ugu muhiimsan halkan: FCHC iyo COVID-19.
Si loo ilaaliyo caafimaadkaaga iyo kan shaqaalaheena:
Kaliya waxaan ku qaabilayna bukaan socodka xafiiskeena iyo qolqoljoogteena waqtigan. Waxa ku yaal “aag sugitaan” oo muddo gaaban ah laakiin ka baxsan xarunta xarunta la-hawlgalayaasha iyo dadka taageera.
Meesha aan iska soo galno ee laga soo galo heerkulkaaga ayaa lagaa qaadi doonaa waxaadna buuxin doontaa foomka sahaminta COVID ee xaqiijinaya inaadan la kulmin astaamo. Waxaan sidoo kale kaa codsaneynaa inaad qirto inaan ku howlan nahay raadinta xiriir si aan u ilaalino bukaankayaga iyo shaqaalaheena.
Bukaankeena iyo shaqaalaheena waa inay xiro maaskaro si sax ah markasta gudaha xarunta. Mid ayaan ku siin karnaa haddii loo baahdo.
Bukaannadeena iyo shaqaalaheena waa inay dhaqaan ama jeermiska ka diraan gacmahooda kahor inta aysan soo galin xarunta.
Bukaannada waxaa la siiyaa boodhadh iyo qalin si loogu isticmaalo booqashada oo dhan. Waxaan sidoo kale ku siineynaa "OCCUPIED" sign for your seat in our lobby si loo hubiyo in qof walba uu adeegsado kursi u gaar ah.
Waxaan kaa codsaneynaa inaad dhameystirto oo aad soo gudbiso waraaqahaaga qaadashada online. Waxaad fursad u heli doontaa inaad dib ugu eegto ballantaada.
Ma inaan sameeyaa ballan ultrasound gaar ah?
No. Laga bilaabo Julaay 1, 2020, Xeerka Ilaalinta Caafimaadka Taranka ee Virginia (RHPA) ayaa la meelmariyay, iyadoo laga saarayo shuruudihii gobolka looga baahnaa ultrasound qasab ah iyo muddo sugitaan! Kani waa war cajiib ah - maadaama aan aaminsanahay in go'aannada daryeelka caafimaad laga gaaro bukaanka iyo takhtarka dhexdooda iyadoo aan la faragelin.
Mudo intee leeg ayaan joogi doonaa xarunta?
Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad ka faa'iideysato kulankeena Telehealth kahor ballantaada shaqsiyeed. Kalfadhiga Telehealth wuxuu u ogolaanayaa Aqoonyahankeena Bukaanka inuu dib u eego foomamka bukaankaaga kana jawaabo wixii su'aalo ah ee aad qabto. Waxay yareyn doontaa waqtiga aad u baahan tahay inaad joogto Xarunta ballantaada qof ahaaneed.
Ilmo iska soo ridid ​​Caafimaad: Haddii aad dhammaysatay fadhigaaga Telehealth, fadlan isu diyaari inaad xafiiska joogtid illaa iyo 1 1 / 2 saacadood si aad u dhammaystirto adeegyada shaybaarka iyo ilmo iska soo rididdaada. Haddii aadan awoodin inaad dhammaystirto kulanka Telehealth, isu diyaari inaad nala joogto 2 saacadood si loo dhammaystiro diiwaangelinta, foomamka bukaanka, adeegyada shaybaarka, la-tashiga shaqaalahayaga caafimaadka iyo ilmo iska soo rididdaada caafimaad.
Ilmo iska soo ridka Haddii aad dhammaysatay fadhigaaga Telehealth, fadlan isu diyaari inaad xafiiska joogtid illaa iyo 2 1 / 2 saacadood si loo dhamaystiro adeegyada shaybaarka iyo nidaamkaaga. Haddii aadan awoodin inaad dhammaystirto kulanka Telehealth, isu diyaari inaad nala joogtid illaa iyo hadda saacadood 3 si loo dhammaystiro diiwaangelinta, foomamka bukaanka, adeegyada shaybaarka, la-tashiga shaqaalahayaga caafimaadka iyo nidaamkaaga. Haddii mudadaadii ugu dambeysay ay ka badneyd 12 toddobaad ka hor, qorsheyso inaad xarunta joogtid ilaa Saacadaha 4.
Waa maxay baaritaanka dhiigga RH?
Qof kasta dhiigiisa waa mid ka mid ah afarta nooc ee waaweyn: A, B, AB, ama O. Noocyada dhiigga waxaa go'aamiya noocyada antigens ee unugyada dhiigga. Antigens waa borotiin dusha sare ee unugyada dhiigga waxayna sababi karaan jawaab ka timaadda habka difaaca jirka. Rh factor waa nooc ka mid ah borotiinka dusha sare ee unugyada dhiigga cas. Inta badan dadka qaba qodobka Rh waa Rh-positive. Kuwa aan haysan Rh factor waa Rh-negative.
Tijaabada Rh factor waa baaritaan caadi ah oo lagu daro baaritaanka dhiiggaaga. Haddii dhiiggaagu ka dhinto antigen-ka Rh, waxaa loo yaqaan 'Rh-negative'. Haddii ay leedahay antigen, waxaa loo yaqaan 'Rh-positive'. Haddii aad tahay Rh-negative, waxaad heli doontaa dawo la yiraahdo Rh immunoglobulin ka dib ilmo soo rididda. Rh immunoglobulin waa wax soo saar dhiig oo ka hortagi kara dareenka hooyo Rh-taban.
qiyaastii 15% dadka waa Rh-Negative.
Rh factor saamayn kuma yeelanayo caafimaadka guud ee qofka. Si kastaba ha noqotee, dhibaatooyinku waxay dhici karaan inta lagu jiro uurka marka dhiiga ilmaha uu leeyahay cunsuriyada Rh oo hooyada dhiigeeda aysan laheyn, si kastaba ha noqotee waxaa looga hortagi karaa inta badan daawooyinka immunoglobulin (RhIg).
Ma cuni karaa balanteyda ka hor?
Waxay kuxirantahay nidaamkaaga. Haddii ballantaadu ay tahay dawo ("kiniinka") ama "soo jeedka" nidaamka, waxaad cuni kartaa cunto fudud ballantaada ka hor.
Haddii ballantaadu ay tahay soo-rididda IV-da ee habka daweynta (markaad huruddo), HA cunin, cabin, xanjo ama sigaar cab 6 saac kahor waqtiga ballantaada. Waxaad ku qaadan kartaa kabbashooyin biyo ah.
Ma cuni karaa balanteyda kadib?
Haa, runti waxaa lagugu siin doonaa jajab, buskud, casiir, shaah ama soodhaha qolka soo kabashada. Ka dib midkood daaweyn caafimaad ama qalliin waxaad dib u bilaabi kartaa jadwalkaaga caadiga ah ee cunista. Waxaan kuu soo jeedineynaa inaad doorato fudud, dufan yar oo si fudud u dheefshiido cuntada bilowga.
Ma wadi karaa gaari ka dib ballanteyda?
Waxay kuxirantahay nidaamkaaga. Ilmo iska soo ridid ​​(kiniin) caafimaad ama soo jeedid ah (oo ay leedahay suuxdinta maxalliga ah) habka ilmo soo rididda, waad iska kaxaysan kartaa naftaada (laakiin qof ayaa ku kaxayn kara haddii aad rabto). HALKAN haddii aad suuxiso / suuxiso (waa u seexan doontaa) hawshaada, baabuur kuma wadi kartid gurigaaga. Fadlan qof ha kuu kaxeeyo guriga (sida la doorbidayo qof kaa caawin doona inaad gudaha gasho oo aad degto) maadaama aadan naftaada ku kaxeyn karin guriga. Waxaan kugula talineynaa inaadan baabuur wadin ugu yaraan 6 saacadood oo dheeri ah.
Goorma ayaan samayn karaa galmo ama galmo?
Barayaasheena caafimaadka ayaa tan iyo intaan ka sii doodi doona, laakiin waxaan kugula talineynaa inaad iska ilaaliso inaad wax siilkaaga galiso toddoba maalmood si loo yareeyo halista cudurka.
Miyaan awoodi doonaa inaan uur qaado markale?
Haa. Khibradaada shaqsiyadeed ee dhanka bacriminta waxay usii socon doontaa sidii hore. Dad badan ayaa layaabay markay ogaadeen xitaa inay fududahay inaad uur yeelato isla markaaba ilmo iska soo ridka! Nidaamka D & C wuxuu leeyahay adeegsiyo badan oo ku saabsan cudurada haweenka oo ay ku jiraan talaabada ugu horeysa ee daaweynta bacriminta. Taasi waa hal sabab oo ah sababta xulashooyinka ka hortagga uurka ay qayb muhiim ah uga yihiin Waxbarashada Xarunteena Caafimaadka. Waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad bilowdo adeegsiga xulashadaada isla markiiba.
Sideen dareemi doonaa shucuur ahaan ilmo soo ridid ​​ka dib?
Jawaabta shucuurta ah ee qof walba ee ilmo iska soo ridka uu ku kala duwan yahay - dhammaantoodna waa ansax. Daraasaduhu waxay muujiyeen in muddo kadib, inta badan ee doortay ilmo soo rididda ay sameeyaan ma ka qoomameeyaan go'aankooda, laakiin taa bedelkeeda gargaarid.
Mashruuca Wadahadalka Ilmo iska soo ridida wuxuu leeyahay qeyb dhameystiran oo ku saabsan La Qabsiga Caafimaadka leh Ilmo Soo rididda Kadib taas oo aan kuu soo jeedinayno inaad akhrido. Waxaan sidoo kale kuu soo jeedinaynaa inaad fiiriso Ilmo iska soo ridka kahor iyo kadib kaas oo ay kujiraan dhowr fiidiyow oo latalin ah iyo ilo.
Haddii aad dareento inay ku caawinayso inaad qof kala hadasho waxa ku saabsan khibradaada, waxaan kuu soo jeedin karnaa ilaha soo socda oo khibrad u leh la-talinta ilmo soo rididda ka dib oo aan xukumi doonin go'aankaaga.
Waa maxay Telehealth?
Telehealth waa ballan aamin ah oo balaaran oo lala yeesho mid ka mid ah barayaashayada bukaanka iyadoo fiidyow ama shir maqal ah. Telehealth waxay ka dhigi kartaa daryeelkaaga caafimaad mid la awoodi karo oo waqti badbaadin kara.
Waa maxay faa'iidooyinka Telehealth?
Qaar ka mid ah faa'iidooyinka Telehealth waxaa ka mid ah:
Helitaanka daryeelka waqti iyo goob kugu habboon adiga. Telehealth waxay kuu oggolaaneysaa inaad kula xiriirto mid ka mid ah barayaasheena bukaanka meel fog halkii aad ka ahaan lahayd xarunteenna. Waxaad kaheli kartaa Telehealth raaxada gurigaaga ama meelkasta oo kale. Intaa waxaa sii dheer, barnaamijkeena Telehealth waxaa ku jira saacadaha habeenkii.
Helitaanka daryeelka jawi aad u raaxo badan. Waxaad dooran kartaa meesha aad joogi doonto marka aad la hadasho barahayaga bukaanka. Haddi ay tahay gurigaaga ama guriga saaxiibkaa, adiga iyo qof ku taageeraya oo kula jooga ama keligiisba, waxaad go'aansan kartaa deegaankaaga. (Sidoo kale? Haddii aad joogto gurigaaga ma aad xidhi doontid maaskaro!)
Waqti yar ku qaadashada xafiiskayaga ballantaada qof ahaaneed. Celcelis ahaan, ka faa'iidaysiga Telehealth waxay yaraynaysaa wakhtiga aad joogi doonto Xaruntayada ilaa 20-30 daqiiqo.
Samaynta lacag bixin qayb ahaan aamin ah (ugu yaraan $ 100) ama xitaa lacag bixin buuxda oo kaarka deynta ah khadka tooska ah. Hadhaaga hadhay waxaa lagu bixin karaa ballantaada shaqsi ahaaneed. (Haddii aad isticmaaleysid caymis, waan hubin karnaa nidaamkaaga waxaanan kugula socodsiin doonaa caymiskaaga iyo lacag-bixinta.)
Maxaan aniga iyo aqoonyahankeyga bukaha ka wada hadlayaa inta lagu jiro Telehealth?
Baraha bukaanka iyo adiguba waxaad dib u eegi doontaa foomamka macluumaadka bukaankaaga, oo ay kujiraan foomamka qaadashada daawooyinkaaga, waxaadna dib u eegi doontaa waxa dhici doona inta lagu jiro ballantaada daryeelka qof ahaaneed ee qofka. Waxay sidoo kale halkaas u joogaan inay ka jawaabaan wixii su'aalo ah ee aad qabto ama aad wax ka qabato wixii walaac ah.
Immisa ayey igu bixinaysaa Telehealth?
Telehealth waa qayb ka mid ah ballantaada daryeelka soo rididda ilkaha mana jirto lacag dheeraad ah. Ballantaada Telehealth, si kastaba ha noqotee, Waxaan codsaneynaa bixinta $ 100 taas oo lagu dabaqi karo qiimaha ballantaada daryeelka ilmo soo rididda. Markaad u gasho doxy.me ballantaada Telehealth, barahaaga bukaanku wuxuu kuu soo diri doonaa farriin kallifaysa macluumaadka kaarkaaga deynta / deynta $ 100. (Nidaaminta lacag bixinta waxaa gacanta ku haya Stripe, oo ah shirkad lacag bixin oo lagu kalsoon yahay oo caan ah. Macluumaadka kaararka deynta ma qabanayso Xarunta Caafimaadka ee Falls Church ama doxy.me.)
Haddii aad ku bixinayso ballantaada daryeelka ilmo iska soo rididda adoo isticmaalaya caymis gaar loo leeyahay, waan kula talin doonnaa haddii ay jiraan wax lacag bixin ah ama caymis wadaag ah waxaan weydiisan doonnaa inaan soo ururinno waqtiga ballantaada Telehealth.
Sideen ugu diyaar garoobaa ballanta Telehealth?
First, Codso ballan khadka tooska ah Baraha bukaanku wuxuu kuu soo diri doonaa emayl ama wuu ku soo wici doonaa si aad u ballansatid ballanta Telehealth-ka waqtiga aad rabto. Waxaad heli doontaa emayl iyo qoraal xaqiijin ah.
Isla marka aad codsato ballantaada, fadlan dhammaystiro foomamka macluumaadka bukaanka khadka tooska ah. Waxaan dooneynaa inaan siino bareyaasheena bukaanka waqti ku filan oo ay dib ugu eegaan taariikhdaada caafimaad ayna hubiyaan in dhammaan waraaqaha loo baahan yahay ay hagaagsan yihiin.
Akhriso macluumaadka ku jira websaydhkayaga ku saabsan ilmo iska soo ridid iyo ilmo iska soo ridid. Xor ayaad u tahay inaad ka fikirto wixii su'aalo ah ee aad qabto.
Xulo meel bannaan halkaas oo aad ku dareemaysid raaxo oo aad si xor ah uga hadli karto. Haddii aad jeclaan lahayd qof ku taageera inuu halkaas kula joogo, waa hagaag.
Ilaa shan daqiiqo ballantaada ka hor, gasho fadhiga Telehealth adoo adeegsanaya iskuxirka la bixiyay. Hubso inaad ku qorto magacaaga sida ka muuqata foomamka macluumaadka bukaankaaga.
Diyaarso kaarka deynta / deynta markaa waad bixin kartaa $ 100 ee ku habboon ballantaada daryeelka ilmo soo rididda.
Telehealth ma tahay mid amaan ah oo gaar loo leeyahay?
Haa. Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Falls Church waxay si qoto dheer u qaadaa sirta bukaankeenna. Waa mid ka mid ah sababaha aan u dooranay doxy.me inay tahay barnaamijkeenna Telehealth - maadaama ay caan ku yihiin u hoggaansamiddooda HIPAA iyo heerarka kale ee asturnaanta iyo amniga ee khuseeya ururada daryeelka caafimaadka.
Fadhigaaga Telehealth waa qarsoodi-ilaa-dhamaadka - taasoo la micno ah in uusan jirin adeege dhexda dhegeysanaya ama keydinaya wixii fiidiyoow ah ama waxyaabaha ku jira kulanka.
Wixii macluumaad dheeraad ah, doxy.me waxay leedahay bog leh faahfaahinta ku saabsan nabadgelyadooda iyo hirgelinta asturnaanta.
Miyaan ka heli karaa Telehealth taleefankayga Android / iPhone?
Haa! Barta internetka ee aan u adeegsaneyno Telehealth waa doxy.me (oo ay adeegsadeen in ka badan 200,000 oo daryeel caafimaad bixiyeyaasha adduunka oo dhan), waxaana laga heli karaa iyada oo loo marayo shabakad internet oo laga adeegsado taleefannada casriga ah iyo sidoo kale kombuyuutarrada Windows, Mac iyo Chromebook iyo kiniinno gaar ah. Hoos ka eeg shuruudaha farsamo ee faahfaahsan.
Qalabkee ayaan u baahanahay si aan ugu isticmaalo Telehealth?
Barta internetka ee aan u adeegsaneyno Telehealth waa doxy.me (oo ay adeegsadeen in ka badan 200,000 oo daryeel caafimaad bixiyeyaasha adduunka oo dhan), waxaana loogu talagalay in loogu isticmaalo aalado badan oo kala duwan oo leh shuruudaha nidaamka ugu yar:
Windows / Mac / Chromebook: Waxaad u baahan doontaa kombiyuutar leh maqal (makarafoon, ku hadla ama sameecadaha dhegaha), fiidiyow (webcam), mid ka mid ah daalacashada soo socota: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ama Safari 11+ (nooca ugu dambeeya), iyo xiriir internet oo adag. (Faahfaahin dheeraad ah ayaa ku jirta bogga shuruudaha nidaamka doxy.me.)
macruufka iyo Android: Safari 11+ nooca ugu dambeeyay ee iOS; Google Chrome on Android. Waxaad u baahan doontaa midkood WiFi ama qorshe xog ah.
doxy.me lama shaqeynayo Amazon Kindle ama akhristayaasha kale ee e-akhriska xilligan.
Waxaa jira qalab loo heli karo tijaabi isku xirka shabakadaada si loo xaqiijiyo inay si guul leh u maamuli doonto doxy.me.
Ma ku fulin karaa ballanta Telehealth anigoo ku hadlaya taleefanka halkii?
Waxaan door bidnay inaan u isticmaalno doxy.me kal-fadhiyadayada Telehealth-ka si bukaankeenna iyo barayaasheena ay isu arkaan inta ay hadlayaan, iyo sidoo kale inaan wadaagno macluumaad muhiim ah shaashadda.
Haddii aadan haysan kombiyuutar ama taleefan casri ah, ama aad doorbideyso inaad ku qabato kulankaaga taleefanka iyada oo loo marayo wicitaan taleefan, fadlan sheeg tan markii aad Codso ballan ama naga soo wac lambarka 703-532-2500 waxaanan kula shaqeyn doonnaa xalalka aad nala xiriiri karto.
Waxaan dareemayaa raaxo badan inaan shaqsi ahaan ula hadlo Baraha Bukaanka.
Taasi waa wax fiican. Qaar ka mid ah bukaannadeennu waxay doorbidayaan inay ku kulmaan Xarunteena. Markii aad Codso ballan, hubi inaad doorato "Waxaan door bidaa in kalfadhigayga waxbarashada bukaanka lagu qabto ballanta shaqsiga ah." Waxaan ka shaqeyn doonnaa inaan jadwal u dhigno ballantaada shaqsi ahaaneed, waxbarashadaada bukaankana waa lagu dari doonaa. Fadlan la soco in ballantaadu ay u badan tahay inay ku saabsan tahay 90 daqiiqo ka dheer marka waxbarashada bukaanka ay ka dhacayso Xarunteena.
WARBIXIN KU SAABSAN BUKAANKA DA'YARTA KA YAR 18
Kawaran haddii aan ahay "yar yar oo madaxbanaan?"
Sharciga Oggolaanshaha Waalidka ee Virginia ayaa qabanaya ma waxay saameyn ku yeelan doontaa xorriyaddaada inaad doorato adeeg caafimaad oo sharci ahaan iyo dastuur ahaanba damaanad qaaday haddii aad tahay "ilmo la xoreeyay", taas oo macnaheedu yahay:
Xaas baad tahay ama waa lagaa furay; or
Waxaad ku jirtaa waajibaad firfircoon oo ka tirsan Ciidamada Qalabka Sida ee Mareykanka; or
Waxaad ku nooshahay si gooni ah oo ka baxsan waalidkaa adiga oo raali ka ah waalidkaa; or
Waxaad haysataa amar maxkamadeed oo ah xorriyad
Waxaan ka yarahay 18 jir mana xoroobin, miyaan u baahanahay inaan helo mid ka mid ah ogolaanshaha waalidkey si aan ilmo uga soo rido reer Virginia?
Xaaladaha badankood, haddii aad tahay ilmo yar oo aan la aqoon oo aad rabto inaad joojiso uurkaaga, waa inaad midkoodna:
Hel ogolaansho mid ka mid ah waalidiintaada, mas'uulkaaga, masuulkaaga ama loco waalid; or
Waxaad si gaar ah ula kulmi kartaa garsoore kaas oo ogolaan kara soo ridida ilmaha adiga oo aan waalidkaa raali ka ahayn.
Waxaan rabaa inaan helo ogolaanshaha mid ka mid ah waalidkey, ilaaliyeheyga, ilaaliyaha ama loco parentis. Maxaan ubaahanahay inaan sameeyo?
Waalidkaaga / mas'uulkaaga ayaa u baahan doona inuu saxeexo foomka qiraya ogolaanshaha go'aanka helitaanka daryeelka ilmo soo rididda. Tani waxay ku dhici kartaa laba dariiqo midkood:
Haddii mid ka mid ah waalidiintaada, mas'uulkaaga, ilaaliyaha ama loco waalid awooddo kula soco Xarunta Caafimaadka ee Kaniisadda Falls: waxay si fudud u buuxin doonaan oo ay saxeexi doonaan "oggolaanshaha oggolaanshaha", foom aan bixin karno, oo ay ku soo ogeysiiyaan mid ka mid ah nootaayooyinka aan ku hayno shaqaalaha. Nootaayada waxay waalidkaaga / mas'uulka uga baahan tahay aqoonsi sawir aqoonsi oo sax ah.
Haddii mid ka mid ah waalidiintaada, mas'uulkaaga, ilaaliyaha ama loco parentis ma yeeli karno kula soco Xarunta Caafimaadka ee Kaniisadda Falls: waxay u baahan doonaan inay daabacaan oo dhammaystiraan waxyaabaha soo socda Foomka Oggolaanshaha Oggolaanshaha (English / Español) oo ay leeyihiin nootaayo. Nootaayada waxay waalidkaaga / mas'uulka uga baahan tahay aqoonsi sawir oo sax ah waxayna u baahan kartaa caddeyn aqoonsi adigu. Fadlan u soo qaado foomka nootaayo ballantaada.
Ka waran haddii aanan u sheegi karin labada waalid midkood?
Waxaan kugu dhiiri galinaynaa inaad lahadasho waalidkaaga hadii aad si amaan ah ulahadli karto (eeg "Hooyo, Aabe, Waan Uur Leeyahay" - ilaha dhalinyarada iyo waalidkood) waana kaa caawin karnaa inaad la hadasho iyaga; fadlan si xor ah ula hadal mid ka mid ah barayaashayada caafimaadka (703-532-2500).
Si kastaba ha noqotee haddii aadan u sheegi karin waalid, waad isticmaali kartaa marinka garsoorka. Ka gudubka garsoorku waa markaad u tagi karto garsoore (maxkamada dhalinyarada) kaas oo kula yeelan doona wadahadal gaar ah go'aan ka gaadhista inaad iska soo ridi karto ilmo la'aan ogolaanshaha waalidka ama adigoon ogeysiin waalidkaaga. Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Falls Church ama koox kale oo doorbid ah ayaa kula soo xiriiri karta qareen iskaa wax u qabso ah si ay kaaga caawiyaan qabanqaabada la hadalka garsooraha. Qareenku wuu kula joogi karaa adiga iyo xaakimka. Waxaas oo dhami waa bilaash. Wixii macluumaad dheeraad ah, ka wac bareyaashayada caafimaadka lambarkan 703-532-2500.
Waa maxay ogolaanshaha waalidka ama sharciyada ogeysiinta ee gobolada kale?
In DC: ma jiraan ogolaansho waalid ama shuruudaha ogeysiiska.
In MD: waxaa looga baahan yahay dhakhtarka ogeysiin waalid. Sharcigu wuxuu u oggol yahay takhtarka inuu ka dhaafo ogaysiinta haddii ay horseedi karto in ilmaha yar la dhibaateeyo, haddii aysan ku habboonayn danaha qofka yar, ama haddii qaangaarka uu qaan gaadh yahay.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad wax ka ogaato sharciyada gobollada kale, fadlan tixraac Machadka Guttmacher Guudmarka Shuruucda Ilmo soo rididda
Sharcigani ma khuseeyaa xakameynta dhalashada iyo la talinta uurka?
MAYA. Sharciga u baahan ogolaanshaha waalidka wuxuu khuseeyaa oo keliya soo ridida ilmaha da'doodu ka yar tahay 18 sano. Adigu, da 'kasta ha ahaadee, waxaad xaq u leedahay sharci inaad la hadasho la-taliye, iyo inaad hesho xakameynta uurka iyo inaad hesho adeegyo kale oo caafimaad ee GYN oo dhammaystiran oo qarsoodi ah.
KONTOROOLKA DHALASHADA / DHAQAALAHA
Sidee u shaqeeyaan ka hortagga uurka?
Waxay shaqeeyaan oo keliya markaad isticmaasho! Golaha Congress-ka Mareykanka ee Dhakhaatiirta Haweenka (ACOG) waxay abuureen waxtar aad u badan FAQ kaas oo maraya uun nooc kasta oo xakameynta dhalmada ah.
Waxaad kaloo tagi kartaa edsider.org si loo ogaado habka xakamaynta dhalmada ee adiga kugu habboon. Xakamaynta uur-qaadistu maahan wax hal-u-dhigma oo sidaas darteed waa muhiim in la tixgeliyo baahiyahaaga si aad u hesho habka xakameynta dhalmada ee adiga kuu shaqeynaya!
Waa maxay ka hortagga degdegga ah?
Ka hortagga uurka degdega ah waa xakameyn dhalasho oo lagaa iibsado oo ka hortageysa uurka galmada kadib. Waad isticmaali kartaa ka hortagga uurka degdega ah isla markiiba ama ilaa 3 maalmood galmada kadib haddii aad u maleyneyso in xakameyntaada dhalmada ay fashilantay, ma aadan isticmaalin ka hortagga uurka, ama waxaa lagugu qasbay inaad galmo sameyso. Ka hortagga uurka degdegga ah waxay ka dhigeysaa inay aad u yar tahay inaad uur yeelatid. Maaha mid wax ku ool ah sida qaadashada ka hortagga uurka kahor, marka haddii aad galmo ahaan firfircoon tahay ama aad qorsheyneyso inaad noqotid, ha isku hallayn ka hortagga uurka degdegga ah ee ah kaliya difaacaaga uurka. Ka hortagga uurka degdega ahi kama difaaco cudurada galmada lagu kala qaado.
Maxay tahay sababta inaan u sameeyo Imtixaan sanadle ah oo GYN ("Well Woman") ah?
Waxaan jecel nahay RN Sharla Taylor's, et al, Jaamacadda Iowa Waaxda Haweenka & Haweenka, jawaab:
Nolosheena oo dhan, waxaan haysanaa xulashooyin badan oo aan sameyno. Xulashooyinkani waxay saamaynayaan qoyskeena, asxaabteena, loo shaqeeyahayaga, iyo kan ugu dambeeya laakiin uguyaraan. Ikhtiyaarrada aan maanta qaadanno waxay saameyn ku leeyihiin xulashooyinka aan ku yeelan doonno mustaqbalka. Xulashada daryeelka caafimaadka sida cuntada, jimicsiga, caadooyinka caafimaadka, iyo baaritaanada jirka ayaa ka mid noqon kara go'aamadayada ugu muhiimsan. Caafimaadkayagu waa mid ka mid ah hantideena ugu qiimaha badan, laakiin marar badan waxaan iska indhatirnaa baahiyahayaga jir ahaaneed ama aan horumarinaa caadoyin waxyeello noo keeni kara Xulasho caqli gal ah oo aan sameyn karno si aan u hubino caafimaadka wanaagsan waa inaan sameyno baaritaanka cudurada haweenka ee sanadlaha ah waxayna kuxirantahay taariikhdaada caafimaad. Pap Smear, waa tijaabo fudud oo aan ku lug lahayn waqti badan ama raaxo la'aan. Pap Smear wuxuu ogaan doonaa dhibaatooyinka ka imaan kara makaanka afkiisa (furitaanka ilmo galeenka) ama siilka (kanaalka dhalashada) goor hore si loo ogaado loona daweeyo. Sababta kale ee wanaagsan ee loo baaro baaritaankaaga sanadlaha ah waa xirfadlahaaga caafimaad sidoo kale wuxuu sameyn doonaa baaritaanka naasaha, baaritaanka cadaadiska dhiigga, baaritaanka miskaha wuxuuna dhegeysan doonaa wadnahaaga iyo sambabahaaga. Tijaabooyinka kale waxaa lagu sameyn karaa iyadoo lagu saleynayo baahiyahaaga iyo taariikhdaada caafimaad. Waa dareen wanaagsan anigoo og inaad caafimaad qabtid iyo inaad qaybteeda ka qaadaneyso sidii aad sidaas ku sii ahaan lahayd. ”
Tijaabada Pap Pap miyuu faa'iido leeyahay haddii la sameeyo xilliga caadada?
Tusaale ahaan, Runtii ma garan karo goorta caadaddaydu dhici doonto. Haddii ay dhacdo in caadadu igu dhacdo miyaan dib u dhigtaa markii dhiigu istaago?
Sababtoo ah natiijooyinka baaritaanka Pap Smear way ka saxsan yihiin markay caadadu tahay ma dhacaya, waxaa fiican inaad isku daydo inaad jadwaliso, ama dib u dhigato, ballantaada si aysan u dhicin xilligaaga caadada. (Si kastaba ha noqotee tani waxay noqon kartaa mid khiyaano leh haddii aad leedahay dhiig bax ilmo-galeenka oo aan shaqeynayn ama caadada oo aan caadi ahayn.) Waqtiga ugu fiican ee baaritaanka Pap Smear waa inta lagu jiro labada toddobaad ee ka dambeeya dhammaadka socodka caadada. Kala hadal tan mid ka mid ah barayaasheena caafimaadka markaad wacdo.
Ayaa halis weyn ugu jira natiijooyinka pap aan caadi ahayn?
Waxaad halis weyn ugu jirtaa natiijooyinka Pap Pap aan caadi ahayn haddii:
aad galmo la sameysay ka hor da'da 18
waxaad leedahay taariikh galmo oo lala yeesho lamaanayaal badan
hooyadaa ayaa qaadatay DES (Di-Ethyl-Stilbestrol) - daawo, oo loo qaatay dhibaatooyinka uurka qaarkood ee uurka laga soo bilaabo 1940s ilaa 1960s
aad qabtid caabuqyo soo noqnoqda oo laga yaabo inay ku faafaan galmada
waad sigaar cabtaa
aad uur yeelatay ka hor da'da 18
waxaad tahay nin jinsi beddelay oo soo maray jinsiga xaqiijinaya daaweynta hoormoonka
Sideen ku bixin karaa adeegyadayda?
Khidmadaha waxaa lagu bixin karaa lacag caddaan ah, MasterCard, Visa, American Express, jeegagga qasnajiga ama amarrada lacagta. Dhammaan khidmadaha waa in la bixiyaa waqtiga adeegyada la bixiyo. Waxaan aqbalnaa inta badan Qorshooyinka Caymiska caafimaadka waana baari karnaa dheefahaaga; hubi annaga Caymis Wadayaasha Waa La Aqbalay ku qor liiska wixii macluumaad dheeraad ah.
Waxaad u qalmi kartaa kaalmada maaliyadeed si ay kaaga caawiso bixinta uurka. Fadlan weydiiso inaad kala hadasho mid ka mid ah shaqaalaheena waxyaabaha ku saabsan baaritaanka u qalmida ee ku saabsan maalgelinta dheeriga ah markaad sameysato ballantaada.
Kuwa caymis sidee ayaad aqbashaa adeegyada?
Xarunta Daryeelka Caafimaadka ee Falls Church waxay la shaqaysaa bixiyeyaasha caymiska gaarka ah ee sida tooska ah hoos ku taxan:
AETNA (HMO, PPO, POS, EPO, HDHP, HSA) Maamulayaasha CareFirst
Maamulayaasha Saxeexa AETNA Shabakadda Caafimaadka Koowaad (Gurmadka degdegga ah oo keliya)
Anthem Buluugga Dhibco Buluugga (HMO, PPO, POS, HDHP) Faa'iidooyinka HealthSCOPE
Heestayaasha Caafimaadka (HMO) Cusbooneysiinta Caafimaadka
Anthem Healthkeepers Plus (GYN Kaliya) Caafimaadka Meritain (GYN Kaliya)
Gawaarida loo yaqaan 'Blue Care Blue Shield' ee loo yaqaan 'Blue Care Blue Blue' (HMO, PPO, Faa'iidada Xulashada Buluuga, Xulashada Buluuga ah ee Dheeriga ah) Qorshaynta badan (Wadada Beech, PHCS) (GYN Kaliya)
Haddii bukaanku uusan hubin in Caymiskooda Caymiska ay kujiraan dheefaha uurka ama cudurada haweenka, waxaan kugula talin karnaa inay wacaan lambarkooda adeegga macaamiisha ee ku yaal dhabarka kaarka caymiska si loo caddeeyo.
Diidmada Macaashka Caymiska: Xaqiijinta waxtarka ayaa ah ma dammaanad qaadka caymiska ama oggolaanshaha bixinta. Faa'iidooyinka waxay ku xiran yihiin dhammaan qodobbada qorshaha oo ay ku jiraan u-qalmitaanka, shuruudaha, ka-reebitaanka iyo xaddidaadaha. Go'aanka kama dambaysta ah ayaa la samayn doonaa marka sheegashada dib loo eego oo ay ka shaqeyso shirkadda caymiska.
Muhiim: Shirkadda caymiska itaal daboosho adeegga bukaanka. Si kastaba ha noqotee, qorsheyaal caafimaad oo badan do ku dar lacag goyn sare ah oo bixiyaha laga yaabo inuu u baahdo inuu si buuxda u bixiyo ka hor inta aysan bilaabin inay daboolaan adeegyadaada. Fadlan kula tali bukaanka inuu la xiriiro adeegyada xubinta daryeel bixintooda si loo hubiyo caymiska loona xaqiijiyo in wax laga jaro iyo inkale ay khuseyso
KA DIGTOONOW QIIMAYNTA FULI!
Maxay yihiin "Xarumaha Uurka Crisis?"
Iska jir Xarumaha Been Abuurka ah
Qeybaha laga soo qaatay websaydhka Xiriirka Ilmo-iska-soo-ridka https://prochoice.org/naf-helps-samantha-bee-expose-crisis-pregnancy-centers/ )
Xarumaha Uurka ee Dhibaatooyinka (CPCs) waxay leeyihiin taariikh dheer oo si ula kac ah u marin habaabiyaan haweenka si looga hortago inay helaan daryeelka ilmo soo rididda. Tusaale ahaan qaarkood si ula kac ah ayey u doortaan magacooda si ay haweenka ugu qaldaan inay aaminaan inay bixiyaan adeegyo ballaaran, oo ay ku jiraan qorsheynta qoyska iyo daryeelka ilmo soo rididda, marka dhab ahaantii aysan midkoodna bixin. Waxay bixin karaan sonogram bilaash ah laakiin ku siin maayaan koobi ama mid noo soo diri maayaan si aad u sii wadato daryeelkaaga. CPCs waxay xayeysiiyaan agagaarka cinwaanada Ilmo iska soo ridka, Uurka, Xarumaha Haweenka ama Xarumaha Caafimaadka. CPCs waxaa laga yaabaa inay isku helaan meel u dhow bixiyeyaasha daryeelka ilmo soo rididda sharci ahaan isku day ula kac ah si loogu jiito bukaanada inay booqdaan xarumahooda.
In kasta oo CPCs ay isu muujiyaan sidii xarun caafimaad oo ay ku booriyaan haweenka inay u yimaadaan la-talinta xulashooyinka, ma bixiyaan la-talin xulashooyin buuxa ah guud ahaanna ma tixraacayaan daryeelka ilmo soo rididda ama xakameynta dhalmada. CPC's waxay adeegsadeen xeelado loogu talagalay inay dib u dhigaan oo xitaa dhibaateeyaan ama ku cabsi geliyaan haweenka inay ka dhigaan xulashada ugu fiican iyaga iyo xitaa inay bixiyaan macluumaad been ah oo marin habaabin ah si looga dhaadhiciyo haweenka inay doortaan ilmo soo rididda. Difaacaaga awgood, weydii CPC-ga aad laxiriirtay haddii ay bixiyaan daryeel ilmo soo ridid ​​ah ama u gudbiyaan soo rididda ilmo soo rididda. Jawaabaha baahsan oo aan caddayn ee su'aashan ayaa kaa dhigaya inaad ka shakido.